Lalàna · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Septambra, 2010
Mpitantana vohikala manohitra ny sivana amin'ny aterineto, voasambotra tany Thailand
Azia Atsinanana28 Septambra 2010
Nosamborina androany tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Bangkok ny mpitantana ny vohikalan'ny gazety tsy miankina iray any Thailand, noho ny fanompàna mpanjaka. Nangingiana ny haino aman-jery mahazatra tany an-toerana momba izany fa ireo mpampiasa twitter kosa namatsy torolàlana sy fanampim-baovao hanampiana ny fanohanana ny hetsika ho fangatahana ny famotsorana ilay mafana fo...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Septambra 2010
Nanambara drafitra hanarahamaso ireo mpamoaka zavatra sy ny media ao amin'ny aterineto aloha i Arabia Saodita, anatin'izany ireo blaogy sy ireo sehatra fifanakalozan-dresaka, mba ho oarakitra ofisialy ao anatin'ny lisitry ny Governemanta. Ny Ampitson'iny, niteraka fanehoan-kevitra marobe izany, izay milaza fa ireo gazety ao amin'ny aterineto ihany no voakasik'izany. Manana...
Azia Atsinanana22 Septambra 2010
Sina: Mpampianatra lalàna iray amidy …
Azia Atsinanana19 Septambra 2010
"Yang Zhizhu no anarako ary teo aloha aho dia mpampianatra mpisolo toerana tao amin'ny Anjerimanontolo Fianarana ny Siansa Politika ho an'ny tanora any Sina. Bevohoka tsy nahy ny vadiko ary tsy marisika ny hanala zaza. Tamin'ny 21 Desambra 2009 izy no niteraka ny zanakay vavy faharoa."
India: Mirehitra indray i Kashmir…
Azia Atsimo16 Septambra 2010
Ny korontana misy amin'izao fotoana any amin'ny faritra Kashmir Indiana dia nateraky ny fanoherana mahery setra nipoitra taorian'ny nivoahan'ny tatitra momba ny fanivaivana ny Korany tany Michigan, Etazonia. 18 raha kely no olona maty ary marobe ny naratra. Mipetraka ny fanontanian'ny olona hoe firy amin'ireny hetsi-panoherana ireny no tena nateraky...
Azia Atsinanana15 Septambra 2010
Azia Atsinanana11 Septambra 2010